Dongguan Enuo ebu Co., Ltd bụ a enyemaka nke Hong Kong BHD Group, plastic ebu imewe na n'ichepụta bụ ha isi azụmahịa. Ọzọkwa, metal akụkụ CNC machining, prototype ngwaahịa R&D, nnyocha eletrik / nlele R&D, plastic ngwaahịa ịkpụzi, spraying na nzukọ na-emekwa ụfọdụ na.
Ihe okike 5 Nkwupụta Ọkt-27-2020
Chei, ụmụ okorobịa! ọhụrụ ebu Mbupu oge !! Ha, Leenụ nwa agbọghọ ahịa anyị nwere obi ụtọ!
Ọ dị mma, tupu m zipu foto a, nsogbu nyere m nsogbu n'obi m. Otu enyi nwere nnukwu njikọ "linkedIn" ejiri nye m ndụmọdụ ndụmọdụ obiọma: Hey, harry! ọ dịghị mma ịkpọ nwa agbọghọ ka o soro ya pụọ, ọkachasị nnukwu ihu ọchị! Bịanụ, ebu rụpụta kwesịrị ịbụ ihe dị oke njọ, ọ dị mma? Nwere ike nwere teknuzu Ihọd onye jide caliper ma ọ bụ na-eru akwụkwọ iji dochie ga-abụ ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị?
N'oge ahụ, dị ka ọ tụrụ aka, enwere m ọmịiko ime ka ndị otu anyị nwee nsogbu, dịka ihe m mere gosipụtara enweghị mmasị nye ndị na-agụ akwụkwọ m hụrụ n'anya. O yiri ka ị na-ejide anya ndị na-ege ntị bụ naanị nzube m ji eziga m! N'ihi ya, n'oge a, m bu n'obi ime ihe ọ tụrụ aro ka m mee, bụrụkwa onye mebere ihe n'ezie! Mgbe ahụ, ejiri m enyemaka nke ndị ọrụ ibe m were foto nke mbụ. dị ka n'okpuru foto e gosipụtara, ọ bụ naanị ebu na ngwaahịa egosiri n'ihu anya m, nke nkịtị na nke dị ọcha, ha niile dị mma. mana ọ dị m ka ihe furu…
Mgbe m mechara foto ndị ahụ na-ewere, ma mee atụmatụ ịlaghachi azụ. Nwa anyi "mgbe 90 gachara" kwuru, si: enwere m ike inwe foto nke ihe eji ebu ihe a? Ekwuru m, n'ezie! Mgbe ahụ ọ na - ebido ịmebe ụdị ọrụ “ọkachamara” niile dị ka ebu, dị ka ịme onwe gị, na ndị ọrụ ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ ahụ niile mechiri igwefoto na-achị ọchị, na mberede ogbako ahụ ga-adị ọkụ ma kwekọọ. Ndi otu anyi nwere obi uto na oru ha, ihe omuma nke igosiputara na-egosi ihu ha
Ọ dị mma, ịme ngwá ọrụ kwesịrị ịbụ ikpe dị oke mkpa ma bụrụ eziokwu, mana iji obi ụtọ na-arụ ọrụ ahụ nwekwara ike ịdị mkpa maka ndị ọrụ anyị. Dị ka ị maara, mgbe oru ngo oge bụ uko, ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ mgbe nile, ọbụna n'otu ntabi anya na-na-ụzọ-oge, na-na nkwa ndị ahịa anyị. Ike gwụrụ ha na ụjọ n'oge usoro a, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume igosi nkwanye ùgwù na ekele anyị maka ọrụ na ngwaahịa ha, gịnị kpatara ya? Mgbe ha n’eto site na “ọrụ aka” ha, ọ bụ na anyị ekwesịghị ịhapụ ha ka ha nụrụ kụrụ aka anyị? Ngwá ọrụ dị jụụ, mana ikpo ọkụ sitere na otu!
Ugbu a otu ụbọchị, ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme mkpesa: Ọ na-esiwanye ike ịnwe ndị ọrụ, n'agbanyeghị ndị na-emepụta ihe, ndị injinia ma ọ bụ arụmọrụ igwe. karịsịa maka otu "mgbe 90s gasịrị", dị ka n'uche ha, ọ dịghị enwe obi ụtọ na ụlọ ọrụ na-akpụzi ebu. Ọgbọ ọhụụ nwere nkọwa ha banyere ịrụ ọrụ, obi ụtọ na-adịwanye mkpa maka iwulite ma wusie otu ahụ ike.
Ya mere ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, ị chere na itinye ọnọdụ obi ụtọ na ọrụ anyị kwa ụbọchị, na-eme ka ndị otu ahụ na-atụrụ ndụ mgbe usoro ahụ adịghị mma ma ọ bụ na ọ bụghị? biko gosipụta àgwà gị site na ịhọrọ foto dị n'okpuru abụọ.
- Nke gara aga
You cheghị na obere nwa anyị nwanyị mara mma n’ịrụ ngwa ahịa
Ndewo ndị enyi, lee ka ndị America si kpee ikpe nke ọma!
Etu esi ejikwa ikuku akụkụ ikuku na mmiri? -Design ngalaba
Ebula ebu ebu ebufere onye ahịa
Kedu ihe bụ usoro nyocha nke sayensị?
Mmiri na-ekpo ọkụ + oke ọhịa na-asọgharị maka ọchị!
Mmiri na-ekpo ọkụ + oke ọhịa na-asọgharị maka ọchị! Ndewo ndị enyi, lee ka ndị America si kpee ikpe nke ọma!